Social Phobia भनेकाे के हाे ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपायहरू::mirmireonline.com
Social Phobia भनेकाे के हाे ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपायहरू
हामी सबैले जीवनको कुनै मोडमा सामाजिक भेलामा केही हद्सम्मको डर महसुस गरेको हुनसक्छौ। धेरै मानिसहरुको अगाडि बोल्नु परे, या उपस्थित हुदा मात्र पनि हात खुट्टा काप्ने, मुटुको धडकन बढ्ने, या पसिना आउने जस्ता सामान्य लक्षणहरू देखापर्न सक्छन। तर यो सबैमा लागु हुन्छ भन्ने छैन, कसैलाई त्य्स्ता सामाजिक भेलाले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ भने कसैलाई यो एकदमै चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ। Social Phobia(or known as Social Anxiety Disorder) एक त्यस्तै अवस्था हो जसमा मनिषलाई एकदम सामान्य भनिने माहोलहरु जस्तै सानो गफगाफले पनि तनाव दिन सक्छ।
यो अवस्थामा, सामाजिक परिस्थितीले निम्त्याउने डर एकदम हावी हुन्छ, यती सम्मकी यो समस्या भएका मानिसले सामाजिक भेलाहरुबाट नै भाग्ने प्रयास गर्न सक्छन। यि डरहरु प्राय अरुले केही भन्लान कि, अरुले केही भने, या समिक्षा गरे या गर्लान भन्ने कुराले निम्त्याउन सक्छ। यसले गर्दा मानिसमा आत्माबल घट्ने, सामाजिक कौशल(Social Skills) वृद्धि नहुने तथा नकरात्मक सोचहरु आउने र Depression को पनि सम्भावना पनि देखिन्छ।
कस्ता अवस्था या परिस्थितीले यो निम्त्याउन सक्छ?
– अपरिचित व्यक्ति सँग बोल्नु पर्दा।
– सार्वजनिक स्थल या परिस्थितीमा बोल्नु पर्दा या आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नु पर्दा जस्तै गाउने, नाच्ने, कविता वाचन इत्यादी।
– भोज-भतेरमा जानु पर्दा।
– स्कुल या क्याम्पस जादा।
– ठुलो स्वोरमा पढ्नु पर्दा।
– अधिकारिक ब्यक्तिहरुसँग बोल्नु पर्दा।
– अरुको अगाडि खादा, लेख्दा, आफ्नो बिचार राख्दा।
यो समस्यासँग जुधिरहनु हुने व्यक्तिहरु सबैसँग आफ्नै डरहरु हुने गर्दछन र यही डरले गर्दा उहाहरु सामाजिक परिस्थितीबाट तनावग्रस्त हुनुहुनेहुन्छ। सामान्यतर पाइने डरहरु यस प्रकार रहेका छन:
– कसैले समिक्षा गर्छ कि भन्ने।
– लज्जित भैन्छ कि भन्ने।
बा कसैलाई नराम्रो भनिन्छ की, कसैको चित्त दुखाइन्छ या आघात पुर्याइन्छ कि भन्ने।
– अरुको ध्यानाकर्षण हुन्छ कि भन्ने।
यी साथ साथै व्यक्ति अनुसार अरु बिभिन्न कारणहरुले पनि यो निम्त्याउन सक्छ।
यसका लक्षणहरू के के हुन त ?
– शारीरिक लक्षणहरू: पसिना छुट्नु, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, मुटुको धड्कन तिव्र हुने, Muscle tension, चक्कर आउने, रिङ्गआटा लाग्ने, पेट्को समस्या जस्तै पखला लाग्ने, वाकवाकी आउने, “out of body” sensation(शरीरबाट बाहिर गएको भान हुने)।
– व्यवहारत्मक लक्षणहरू: सामाजिक भेला बाट टाढा हुन खोज्नु, चाडै Nervous हुनु, कही गरी सामेल भए पनि टाढिन खोज्नु इत्यादी।
यसका कारणहरु के के हुन त?
Social Phobia को पछाडि एउटा बिशेष कारण छैन। यद्यपि बिभिन्न कारणहरुले यो समस्या निम्त्याउने गर्दछ र यसमा पनि अरु बिभिन्न मानसिक रोगहरु जस्तै Genetics, बातावरण, व्यक्तित्व, सामाजिक वनोटले प्रभाव पार्दछ।
Genetics: बिभिन्न अनुसंधानहरु अनुसार बिरामीका प्रथम श्रेणीका आफन्तहरुमा यो समस्या देखिने सम्भावना लगभग २ देखी ३ गुना बढी हुन्छ।
Environmental factors: पर्यावरण को कारणले जस्तै सामाजिक वनोट, एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण, साथसाथै लाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संस्कृति तथा रीतिरिवाजले पनि असर गर्नेगर्दछ।
Personality अथवा व्यक्तित्व र सामाजिक अनुभव र बिगतका भोगाइहरुले (उदाहरण: bullying, जिस्क्याउने) पनि यो समस्या निम्त्याउन प्रभाव पार्ने गर्दछ।
Brain को Amygdala भन्ने भाग जसले मानिसको डर नियन्त्रण गर्छ, धेरै सकृय हुँदा पनि यो अवस्था आउने देखिएको छ।
Medication तथा Substance abuse ले पनि यसमा कारकको काम गर्छन। धेरै मान्छेहरुले यो समस्या सँग जुध्न रक्सी तथा विभिन्न किसिम्का Drugs जस्तै benzodiazepines प्रयोग गरेको पाईन्छ र सुरुवातमा यसले काम गरेको जस्तो देखियता पनि पछी गएर झन समस्या बढ्ने गर्दछ।
यी सबै कारकहरुको अन्तर्कृयाले यो समस्या ल्याउने गर्दछन।
यदी Social Phobia का यी मध्य कुनै लक्षणहरूहरु देखिएका छन भने मनोचिकित्सकले विरामीलाई मनोचिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न सोधेर मूल्यांकन गर्नुहुन्छ। मनोचिकित्सकले लक्षणहरूका अवधि र तीब्रतालाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्दछन। आएका नतिजा र विरामिको अभिरुचि अनुसार यसको लागि निवारढको प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन्छ।
मुख्यत चिकित्सक को सल्लाह अनुसार विरामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। Social Phobia को लागि Cognitive Behavioral Therapy तथा दबाइ(Medication) जस्तै selective serotonin reuptake inhibitors(SSRIs) को प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Contact no: 9841741929